यी हुन् नेपाली शब्दकोष र जनजीवनमा फरक–फरक अर्थ लाग्ने केही प्रचलित शब्द र शब्दार्थ ।
३ मंसिर २०७२ बिहीबार
नेपाली शब्दकोष र जनजीवनमा फरक–फरक अर्थ लाग्ने केही प्रचलित शब्द र शब्दार्थ :
सहमति : नयाँ विवादको तयारी गर्नु । अब के विषयमा विवाद गर्ने भनेर टुंगो गर्नुलाई सहमति भनिन्छ ।
संयमित : अरूले आक्रमण गर्दा चुपचाप सहनु, प्रत्याक्रमण नगर्नु । खासगरी नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट अधिकारकर्मी र विदेशीले गर्ने अपेक्षा ।
नाका : स्वदेशी तथा विदेशी मिसिएर धर्ना बस्ने ठाउँ ।
भिडन्त : फरक समुदाय या सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गर्ने कार्य ।
सम्बोधन : नाजायज माग पूरा गर भन्नलाई प्रयोग गरिने घुमाउरो शब्द ।
नाकाबन्दी : जनता सताएर मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने कार्य । नेपाल र भारत सरकारले उच्चारण गर्न नमिल्ने शब्द ।
घर झगडा : अरूले लगाइदिएको आगो ।
अधिकार : के माग्दैछु भन्ने आफैँलाई थाहा छैन भने प्रयोग गर्ने सजिलो शब्द ।
रमिता : सरकारले देशको हालत हेर्ने कार्य या तरिका ।
डिजेल–पेट्रोल : रगत
ग्यास : अक्सिजन
दिउँसो श्रीमान् जान्छ पेट्रोलको लाइनमा, श्रीमती जान्छे ग्यासको लाइनमा । अहा, क्या मिलेर लाइन लागेका, घाम तापेका । सुख कि दु:ख पाएका ? पाए ग्यास, पेट्रोल ल्याउँछन्, नपाए सरकारलाई गाली गर्छन् । तर, के गर्नु, गालीमा ‘मेड इन नेपाल’ लेखेको हुँदैन, गालीले समाधान दिँदैन । चाउचाउ खाजा खान्छन् । थाई प्रविधिमा बनेको चाउचाउमा मैदा उतैको, मेसिन उतैको, खोल भारतले छापेको, बाहिरपट्टि क्या मजाले मेड इन नेपाल लेखेको ।
आगो नबाली भान्सा चल्दैन, आन्दोलन नगरी देश चल्दैन । आन्दोलन छ र त देश छ । पहिले नेपाल बन्द हुन्थ्यो, देश चलेकै थियो, अचेल नाका बन्द हुन्छ तैपनि देश चलेकै छ । आन्दोलनमय छ नेपाल, आन्दोलन स्वदेशी, आन्दोलनकारी विदेशी, गोली हान्ने नेपाली, गोली खाने विदेशी । गोली पनि विदेशमै बनेको, बन्दुकमा लेख्या होला तर गोलीमा मेड इन.... हुँदैन लेखेको । सितिमिति देख्न पाइन्न मेड इन नेपाल लेखेको । अचम्मै छ, परनिर्भर भएर पनि यतिका समय कसरी नेपाल चलेको ?
मन्त्री छान्ने लमी
लमी पेसा सुन्नु’भा छ ? लमीसँग गजब क्षमता हुन्छ, यिनले मान्छे छान्न सघाउँछन् । बिहे गराइदिन्छन् । जीवनभरिलाई मान्छे छान्न सघाउने लमीले दुई–चार महिना या एक–दुई वर्षका लागि झन् सजिलै मान्छे छानी देलान् । अब एमाले नेताहरू, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लमीहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्‍यो । र, मन्त्री छान्न सहयोग गर्न भन्नुपर्‍यो ।
मन्त्री बन्नेको योग्यता र गुण के के हुनुपर्छ भन्ने लमीलाई बताउने अनि भने अनुसारको गुणका सभासद् ट्वाक्क छानेर लमीले प्रधानमन्त्रीका सामु पेस गर्छन् । त्यसपछि ती सभासद्ले प्रधानमन्त्रीको सात फन्को प्रदक्षिणा गरेर सरकार टिकेसम्म साथ रहने, मौका नपरेसम्म धोका नदिने कसम खानेछन् ।
यति सजिलै मन्त्री छान्ने उपाय छाडेर एमाले नेताहरू बेकारमा किन गलफती गरेका होलान् ? अहिले त जसोतसो छान्न पनि सक्लान् तर मन्त्री छान्न जुनसुकै पार्टीलाई यस्तै सकस हुन्छ । त्यसैले
यस्तो सकसको समाधान नै लमीलाई जिम्मा दिने हो ।